Hatraiza ny Tumblr? | Martech Zone
Hatraiza ny Tumblr?
Zoma, Febroary 28, 2014 Douglas Karr
Ok, angamba ny fanontaniana voalohany dia inona ny Tumblr? Tumblr dia sehatra fitorahana bilaogy bitika sy tranokala tambajotra sosialy (an'ny Yahoo! ankehitriny). Io sehatra io dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa haino aman-jery multimedia sy atiny hafa amin'ny bilaogy fohy. Ny rafitra dia nanamboatra fomba hizarana amin'ireo mpampiasa hafa - mitondra fiakarana an-taoniny sy fahitana ho an'ireo olona mampiasa azy. Izy ireo koa dia manana tena tsara finday fampiharana.
Na dia tsy matetika aza aho dia manao izany zarao ao amin'ny bilaogiko Tumblr ny atinay amin'ny alalan'ny Jetpack fampidirana izay nanampy WordPress. Manaraka an'i Tumblr vitsivitsy ihany koa aho ary mahazo mailaka fanavaozana tena tsara avy amin'ny rafitra miaraka amina fanapahana izay zarain'iza. Amin'ny maha mpivarotra anao dia mety tsy ho tsapanao ny halehiben'ity tambajotra ity. Mahavariana tokoa ireo isa!
Website Host Reviews dia nizara ity sary ity rehetra momba an'i Tumblr:
Tags: firy ny tumblrTumblrtumblr vs facebooktumblr vs pinteresttumblr vs twitterinona ny tumblr